Granit Xhaka oo la shaaciyay lambarka uu u xiran doono Arsenal…(Ma ahan 34) – Gool FM
Granit Xhaka oo la shaaciyay lambarka uu u xiran doono Arsenal…(Ma ahan 34)
(London) 27 Maajo 2016. Arsenal ayaa shaacisay lambarka uu u xiranayo saxiixooda cusub ee qadka dhexe Granit Xhaka.
Xhaka ayaa kooxihii uu horey ugu soo ciyaaray u soo wada xirtay lambarka 34-aad waxaana la filayay in isla lambarkaa uu Gunners u xiran doono maadaama la sheegay in Francis Coquelin ee xirta lambarkaas uu ogolaaday inuu u baneeyo wiilka cusub.
Laakiin sheekadaa iminka waa isbadeshay oo Arsenal ayaa boggeeda rasmiga ee Twitter ku shaacisay in Xhaka uu xiran doono lambarka Aaron Ramsey ee 16-aad halka Ramsey uu isna xiran doono lambarka 8-aad uu ka tagay Mikel Arteta..
Sidaa darteed Francis Coquelin waa uu u bad-baaday lambarkiisa wuuna la soo shir tagi doonaa kal ciyaareedka dambe.
Sidoo kale waxaa horey loo shaaciyay in Alexis Sanchez uu ka tagi doono lambarka 17-aad isla markaana uu xiran doono midka uu ka tagay Tomas Rosicky ee 7-aad.
Kooxda Real Madrid oo caga dhigatay magaalada Milano ka hor kulanka kama dambeysta berrito ee Champions League... + SAWIRRO
FIKIRKAAGA KA DHIIBO: 5-tan macallin midkee dhibcaha ugu badan la imaan doona Premier League xilli ciyaareedka soo socda?